Seychelles Tallaabooyinka Safarka Cusub Sababo la xiriira COVID-19 Omicron Variant
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles Tallaabooyinka Safarka Cusub Sababo la xiriira COVID-19 Omicron Variant
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Seychelles Ogaysiis Safar Cusub
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay dhaqan gelineyso tilaabooyin socdaal oo cusub oo loogu talagalay dadka soo booqda, muwaadiniinta Seychelles iyo dadka deggan ee ka safraya gobolka Koonfurta Afrika sababo la xiriira kala duwanaansho cusub oo COVID-19 ah oo ku wareegaysa Koonfur Afrika iyo dalalka ku xeeran.
Iyadoo laga jawaabayo, shirkadda diyaaradaha ee Air Seychelles, ayaa joojisay dhammaan duullimaadyadii ka imanayay Johannesburg ilaa Seychelles marka laga reebo kuwa Diseembar 1, Diseembar 17, iyo Diisambar 19. Rakaabka horay u joogay Seychelles ee loo ballansanaa inay u safraan Johannesburg waa inay la xiriiraan diyaaradahooda ku saabsan arrimaha la xiriira diyaaradda. duullimaadyadooda bixitaan.
Tallaabooyinka cusub waxay u baahan yihiin dhammaan dadka horey u joogay Seychelles ee aaday dalalkan labadii toddobaad ee u dambeeyay inay aadaan baaritaanka PCR haddii ay joogeen Seychelles shan (5) ilaa afar iyo toban (14) maalmood ka dib imaatinka. Kuwa ku sugnaa Seychelles in ka yar shan (5) maalmood waa inay sugaan maalinta 5 si ay u aadaan tijaabada PCR.
Dhammaan Seychelles iyo deganeyaasha ku laabanaya Seychelles ee tagay mid ka mid ah dalalkan labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa looga baahan yahay inay is-karantiiliyaan oo ay qaataan tijaabada PCR ee qasabka ah maalinta 5 ka dib imaatinka.
U safrida Koonfur Afrika iyo dalalka kale ee la magacaabay aad ayaa loo niyad jabay.
In kasta oo aysan jirin wax caddayn ah oo sheegaya in nooc B.1.1.529, oo lagu magacaabo Omicron oo ay leedahay Ururka Caafimaadka Adduunka, laga helay Seychelles, maamullada maxalliga ah ayaa ku taliyay in dhammaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada iyo bulshada ee jira ay tahay in si adag loo ixtiraamo.
Si loo ogaado in Seychelles ay soo dhawaynayso dhammaan booqdayaasha iyada oo aan loo eegin heerka tallaalkooda shuruudda ah in ay haystaan ​​shahaado tijaabo ah oo COVID-19 ah oo PCR ah oo ay tahay in la qaato 72 saacadood gudahood ka hor safarka, marka laga reebo booqdayaasha ka imanaya waddamada liiska xaddidan sida soo socota: Koonfur Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia iyo Zimbabwe.
Karantiil uma baahna booqdayaasha soo galaya Seychelles. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si xoog leh loogu dhiirigeliyay in si buuxda loo tallaalo kahor safarka. Waxaa loo oggol yahay dhaqdhaqaaq xor ah inta lagu jiro fasaxooda oo dhan laakiin waa inay u hoggaansamaan dhammaan tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha. Waxa kale oo ay xor u yihiin in ay joogaan xarun kasta oo la shahaado caafimaad oo dalxiiska ah iyada oo ay shuruudu tahay in ay raacaan dhammaan borotokoolka caafimaadka ee ka jira xarumahan.
Shuruudihii u dambeeyay ee gelitaanka iyo habraacyada caafimaadka iyo sidoo kale dhammaan liisaska la cusboonaysiiyay ee hawlwadeennada dalxiiska ee shatiga leh iyo xarumaha hoyga ee la caddeeyay sida COVID-ammaan ayaa laga heli karaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska shabakada iyo Seychelles.govtas.com.